Sababta ay ugu careysan tahay Dortmund, ujeeddada ka dambeysa diidista Haaland & Man United oo arkootay baddelka 20-jirka reer Norway – Gool FM
(Manchester) 12 Abriil 2021. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa iska diidday inay kusoo biirto loollanka loogu jiro saxiixa laacibka kooxda Borussia Dortmund ee Erling Haaland suuqa xagaagan.
Haaland ayaa bartilmaameed u ah qaar ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan qaaradda Yurub, hase ahaatee, Man United ayaa iska fogeysay u dhaqaaqista xiddigan maadaama ay ka careysan tahay naadiga Dortmund.
Jariiradda The Athletic ayaa ku warrameysa in kooxda Ingiriiska ka dhisan ay qiimeysay lacagaha kaga bixi kara saxiixa 20-jirka reer Norway, waxayna isaga baxday guud ahaan doonistiisa.
Wararka ayaa intaas ku daraya in Manchester United ay ka careysan tahay qaabkii uu u burburay wada xaajoodkii 10-ka asbuuc socday ee ay ku dooneysay saxiixa Jadon Sancho xagaagii hore.
Dhinaca kale, Red Devils ayaa bartilmaameed ka dhigatay laacibka Tottenham Hotspur u ciyaara ee Harry Kane, kaasoo mustaqbalkiisa Spurs uusan hubanti ahayn.
Kane ayaa xagaagan si aad ah loola xiriirinayaa ka tagista kooxda ka dhisan Waqooyiga London, isagoo haatan looga gacan haatinayo Old Trafford.
Si kastaba ha ahaatee, Paris Saint-Germain iyo Real Madrid ayaa qayb ka kooxaha doonaya kabtanka xulka qaranka England.